Ajaanib lagu daray guddiga ka gar-naqi doona doorashada Somaliland |
Ajaanib lagu daray guddiga ka gar-naqi doona doorashada Somaliland
Khilaafka siyaasadeed ee hareeyay doorashada la filayo inay ka dhacdo jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madaxbannaanida ee Somaliland ayaa u muuqda mid hadda xal laga gaaray, kadib markii ay maanta heshiis kala saxiixdeen Madaxweyne Muuse Biixi iyo hogaamiyayaasha mucaaradka.
Warsaxaafadeed ay wadajir usoo saareen oo ciwaankiisu yahay Heshiiska Qabashada Doorashooyinka Golayaasha Deegaanka iyo Golaha wakiillada ee Somaliland sannadka 2020, ayaa lagu sheegay in lagu heshiiyey toddoba qodob oo lagu qeexay awoodaha sharci ay leeyihiin Komishanka Dooroshooyinka, oo sii ahaan doona kuwa hadda jooga, iyadoo laba xisbi mucaaradna ay ku soo dari doonaan labadoodii xubnood oo markii hore ka maqnaa.
Waxaa sidoo kale qodobbada lagu heshiiyey ka mid ah in la sameeyo guddi loogu magacdaray Guddida Farsamada Maamulka Doorashada, guddidaas oo ka koobnaan doona toban xubnood oo kala ah toddobadii xubnood ee komishanka ahaa iyo saddex xubnood oo beesha caalamku ku soo darayso, kuwaas oo sida la sheegay ahaan doona cidda yeelan doonta shaqada ugu badan ee doorashooyinka.
Xubnaha Guddida Doorahooyinka, ayaa shaqadoodu ahaan doontaa si Guddida Farsamadu hawshooda u gutaan inay masuul ka yihiin u gudbinta xukuumadda miisaaniyadda doorashooyinka, magacaabista, caydhinta, xulashada, anshax marinta shaqaalaha iyo ku dhawaaqisha taariikhda doorashooyinka iyo natiijadoodaba.
Toddobadan qodob ee heshiiskaasi ka koobnaa waxaa sidoo kale ka mid ah, in haddii wax khilaaf ahi ka yimaaddo heshiiskan iyo wax ka beddelkiisa iyo ka gar-naqiddiisa in ay ka go’aan gaadhayso Maxkamaddda Sare.
Arrintan ayaa ku soo beegmaysa markii dhawaan madaxweynaha Somaliland uu ka hor sheegay baarlamaanka soojeedin ah in la soo horumariyo furidda ururradii siyaasadda, taas oo xisbiyada mucaaradka ahna kaga jawaabeen in iyana ay dalbanayaan soo horumarinta doorashada madaxtooyada, taas oo dadka wax falanqeeyaa ku sifeeyeen, inay ku qotonto aargoosi siyaasadeed, oo dhanba dhanka kale ku qasbayo inuu soo dabco.
Khilaafkan oo sal ku lahaa, khilaaf markii horeba u dhaxeeyey xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadda oo ku saabsanaa sida loo xulayo Komishanka Doorashooyinka ayaa hadda se u muuqda mid ugu danbayn heshiis laga gaadhay, kolkii dhexdhexaadini ka timid Beesha Caalamka.
Waa markii ugu horreysay ee beesha caalamka ay xubno ku yeelato hannaanka doorashooyinka Somaliland.